कहालीलाग्दो त्यो ‘एक मिनेट’ ! खाटमुनि लुकेर ज्यान जोगायौं ! – Rastriyapatrika
कहालीलाग्दो त्यो ‘एक मिनेट’ ! खाटमुनि लुकेर ज्यान जोगायौं !
बारा : बारा फेटा गाउँपालिका–१ भलुई भरवलियाका शिवजी राउत जयसवालले आइतबार परिवारसँग रमाउँदै खाना खाए । सदाझैं खाना खाएपछि उनले परिवारका सदस्यलाई सुत्न पठाए र आफू पनि सुत्ने तरखरमा लागे । अचानक उनका अगाडि यस्तो विपत् आइलाग्यो, जसले एकछिनअघिको खुसीलाई ‘एक मिनेट’ मै शोकमा बदलिदियो ।
सामान्य वर्षा र हावाले भयानक रूप लिँदा सुत्ने तरखरमा रहेका जयसवाल परिवार घरविहीन बन्न पुग्यो । त्यति मात्र होइन, भुमरीसहितको भीषण हुरीले घर भत्काउँदा उनकी भाउजू मनरमा देवी जयसवालको तत्काल निधन भयो । परिवारका अन्य सदस्यको ज्यान जोगिए पनि त्यो क्षण आफ्ना लागि कहालीलाग्दो बनेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘खुसीका साथ बसिरहेको परिवारलाई हावाहुरीले एक मिनेटमै तहसनहस बनाइदियो ।’ घर उजाडिएको पीडाले उनी भावविह्वल छन् ।
खाना खाँदै गर्दा च्यापिइन् कुसिया
फेटा गाउँपालिका—७ पुरैनियामा अढाई वर्षीया बालिका कुसिया खातुन खाना खाँदै थिइन् । उन बसेको घरको पर्खालले उनलाई किच्यो । उनलाई घरको पर्खालले थिचिदियो । आमा नजमुन नेसहाले तीन छोरी मनि, साहिल र रेसमा खातुनलाई घरबाट निकालेर बचाइन् । तर कुसियालाई बचाउन सकिनन् ।
तीनै छोरी र नजमुन घाइते छन् । उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ‘बसेको घरकै पर्खालको इँटाले बच्चीलाई थिच्यो । निकाल्दा मरिसकेकी थिइन्,’ स्थानीय मोहमद हारुलले भने ।
कुसियाको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको छ । कुसियाका बुबा मेहोरोदिन मियाँ मजदुरी गर्न साउदी गएका छन् ।
टोलमा शव उठाउने मान्छे छैन
फेटा गाउँपालिका—१ भलुही भरवलियाका एघारमहिने बालक रञ्जित दास सोमबार आमा खोजिरहेका थिए । उनी छिनछिनमा रुन्थे । हजुरबुबा रामसुरत फकाउँदै दूधदानीमा दुध चुसाउँथे । रञ्जितकी आमा रुनादेवीको हावाहुरीमा मृत्यु भएको छ । रुनादेवी हावाहुरीले घर भत्काउँदा काठले लागेर घाइते भइन् । उपचारका क्रममा ३२ वर्षीया उनको वीरगन्जमा मृत्यु भयो ।
रामसुरतकी ५० वर्षीया पत्नी मोतीसार देवीको पनि मृत्यु भएको छ । उनको शव भत्किएको झुपडीछेउमा तन्नाले छोपेर राखिएको थियो । पत्नीको शव लिन वीरगन्ज गएका छोरा भीम दास साँझसम्म फर्किएका थिएनन् ।
रामसुरत गोर्खामा मजदुरी गर्न गएका थिए । पत्नी र बुहारीको मृत्यु भएको खबर पाएपछि उनी सोमबार बिहान गाउँ आइपुगेका हुन् । भत्किएको झुपडी छेउमा राखिएको मोतीसार देवीको शव कुर्न रौतहटबाट २२ वर्षीया छोरी मीनादेवी आइपुगेकी छिन् । रामसुरतले पत्नीको शव पनि उठाउन सकेका छैनन् । गाउँका मानिस घाइते भएर उपचार गराउन वीरगन्ज गएकाले पत्नीको दाहसंस्कार गर्न नसकेको रामसुरतले बताए ।
उनले भने, ‘घर भत्कियो, पत्नी र बुहारीको मृत्यु भयो । नातिनातिना आमा खोजिरहेका छन् ।’ बस्तीका हरिदास तत्माको पनि घरमा च्यापिएर मृत्यु भएको छ । टोलमा ५० भन्दा बढी घर भत्किएका छन् ।
शिवजी, नजमुन र रामसुरत मात्र हैन, हुरीले वितण्डा मच्चाएको फेटाकै पुरैनिया, गमरिया, धर्मनगर, प्रसौनी गाउँपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकाका सयांै परिवार यस्तै पीडामा छन् । २७ जनाको ज्यान जाने गरी आएको कहालीलाग्दो हुरीका कारण झन्डै चार हजार घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । घाइते चार सयभन्दा बढीको कलैया अस्पताल, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
‘खाटमुनि लुकेर ज्यान जोगायौं’
रातिको समयमा भीषण हुरी चलेपछि बस्तीमा भागदौड मच्चिएको स्थानीयले बताए । कतिपयले भागेर ज्यान जोगाए । भाग्न नसकेका च्यापिएर मरे । फेटा १ का श्यामनारायण पटेलले हुरीले घर हल्लाउन थालेपछि ज्यान जोगाउन खाटमुनि लुकेको बताए । ‘बाहिर निस्केर भाग्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले भूकम्प आएझंै महसुस ग¥यौं’, पटेलले भने, ‘छोराछोरी चिच्याउन थालेपछि सबैलाई खाटमुनि लुकाएँ । घरको माथिल्लो भाग मात्रै भत्किएकाले क्षति हुन पाएन ।’
गाउँका बासिन्दा सोमबार दिनभर त्रसित थिए । चापाकल पुरिँदा स्थानीयले पानी पिउन पाएका छैनन् । कतिपयले आइतबार साँझदेखि केही खानेकुरा पाएका छैनन् । भग्नावशेषअगाडि मृतकका परिवारको रुवाबासी चलेको थियो ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा रातको समयमा उद्धार गर्न निकै कठिन भएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रातभर सक्रिय भए । घाइते सबैलाई राति नै अस्पताल पु¥याइयो । हुरीले बिजुलीको पोल र रुख ढल्दा बढी क्षति भएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले गरे हवाई निरीक्षण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावित क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेका छन् । उनले वीरगन्जस्थित अस्पतालमा उपचार गराइरहेका घाइतेसँग भेट गरे । प्रदेशका २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलसहित प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री घटनास्थल पुगेका थिए । मन्त्री सोनलले घाइतेको उपचार र बसोबासको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । ‘अहिले हामीले घाइतेको उपचार र विस्थापित परिवारलाई सकेसम्म राहतका लागि प्रयास गरेका छांै’, उनले भने, ‘हुरीले भत्काएको सबै परिवारको घर प्रदेश सरकारले बनाउनेछ ।’
राहत संकलन तीव्र
फेटा गाउँपालिका र प्रसौनी गाउँपालिकाले विस्थापित परिवारलाई खानेकुराको व्यवस्था गरेका छन् । रेडक्रसलगायत संघसंस्थाले राहत संकलन कार्य तीव्र पारेका छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेल धुर्मुसले बारा आएर प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरेका छन् । उनले चार सय थान त्रिपाल, ९ क्विन्टल चामल र चार सय कार्टुन चाउचाउ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे ।
हुरीले घर भत्किँदा पुरैनियामा ज्यान गुमाएका ९ जनामध्ये सात जनाको स्थानिय कबरस्तानमा सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ ।